Antsipirian'ny fizaram-pahaizana »University of Hodges
Tongasoa ireo nahazo diplaoman'i Hodges !!!
Miarahaba anao amin'ny fahazoana ny mari-pahaizana ary mandray ny dingana manaraka amin'ny ho avy. Tena faly izahay fa, ary reharehanay ny tsirairay avy! Na dia mety hifarana aza ity toko ity, dia vao manomboka ny ankamaroan'ny fotoana omen'ny mari-pahaizana vaovao amin'ny dianao ho avy.
Manantena ny hahita anao izahay amin'ity taona ity amin'ny Lanonana fanombohana faha-31!
Fanombohana diplaoman'i Hodges University
Daty: Alahady 20 Jona 2021
Fotoana: 4:00 hariva
Toerana: Hertz Arena, 11000 Everblades Parkway, Estero, Florida 33928
Fantaro alohan'ny handehananao fampahalalana
Isan-taona, ny lanonana fizarana diplaoma dia hetsika akademika manandanja indrindra ataon'ny Hodges University ho an'ny mpianatra sy ny fianakaviana Hodges iray manontolo. Io no fara-tampon'ny asa mafy, fikirizana ary fanoloran-tena ho an'ny mpianatra sy ny fianakaviana. Andro toy izao no tokony hankalazana. NY Lanonana fanombohana faha-31 hanaja ny fankalazana nentim-paharazana izay miaraka amin'ny fankalazana ny zava-bitanao akademika. Misokatra ho an'izay mpianatra nahazo diplaoma ny lanonana fanombohana amin'ity taona ity 6 Jona 2019 hatramin'ny 2 Mey 2021.
Etsy ambany, nanome lisitra fizahana diplaoma izahay izay natao hanomanana anao amin'ny andro fizarana diplaoma sy hamaliana ireo fanontaniana momba ny lanonana fizarana diplaoma. Ity lisitra fanamarinana ity dia manolo famerenana famoahana diplaoma ara-dalàna. Azafady mba avereno jerena ny fizarana tsirairay raha mila fampahalalana fanampiny izay mila omaninao amin'ny 20 Jonath Andro famaranana.
1. Fenoy ny fepetra takiana amin'ny diplaoma rehetra
Andraikitry ny mpianatra ny mameno ny endrika Intent to Graduate amin'ny fiandohan'ny fotoam-pivoriany farany. Azafady mba alao antoka fa nanamarina niaraka tamin'ny Mpanolo-tsaina ny traikefa amin'ny mpianatra ianao mba hanamarinana fa nahatratra ny fepetra takiana amin'ny oniversite rehetra ianao araka ny voamarika ao amin'ny katalaogin'ny oniversite. Raha tsy mahafeno ny fepetra rehetra takiana ianao, dia tsy homena ny mari-pahaizana raha tsy feno ny fepetra takiana. Azafady mba tsarovy fa anjaranao ny miantoka ny fahafaham-po rehetra takiana.
2. Alaharo ny kapaotinao, ny akanjo misy anao ary ny tadinao
Ny mpianatra te handray anjara amin'ny lanonana fizarana diplaoma dia takiana amin'ny fividianana ny mari-pahaizana momba ny diplaoma (kapaoty, akanjo ary famafazana) aorian'izay May 21, 2021. Entanina ny mpianatra hanafatra ny regalia mialoha mialoha an'io fe-potoana io mba hiantohana ny fandefasana ara-potoana. Ity fividianana ity dia tsy tafiditra ao anatin'ny sarany fizarana diplaoma. Ireo entana ireo dia azo baverina an-tserasera amin'ny Herff Jones na mivantana amin'ny hetsika Fankalazana ny diplaoma.
3. Tady manome voninahitra, fehiloha ary pin
Ireo entana manan-kaja ireo dia azo alaina ao amin'ny campus Fort Myers, na azonao atao koa ny mangataka namana na mpianakavy iray haka ny tadiny ho anao. Azonao atao koa ny maka azy ireo amin'ny andro fanombohana.
4. Saripika famoahana sary diplaoma
Ny University Hodges dia nanakarama GradImages ho mpaka sary ofisialy ho an'ny sekolinay sy / na lanonana fanombohana. Sary telo isaky ny mpianatra nahazo diplaoma nalaina nandritra ny hetsika:
Rehefa mankany amin'ny lampihazo ianao.
Eo am-pelatananao ny tanan'ny filoham-pirenena eo afovoan'ny sehatra.
Rehefa avy nivoaka ny lampihazo ianao.
Ny porofo manamarina anao dia ho vonona hijery an-tserasera raha vantany vao 48 ora aorian'ny lanonana. Na dia tsy misy adidy mihintsy aza ny manafatra dia hanangona 20% amin'ny baiko $ 50 na mihoatra ianao amin'ny fandraisanao anjara. Ny fisoratana anarana mialoha dia fomba iray hahazoana antoka fa ny vaovao momba ny fifandraisana dia havaozina amin'ny GradImages, mba hahafahan'izy ireo manome ny porofo omenao haingana araka izay tratra. Raha hisoratra anarana mialoha ny porofom-panombohanao dia tsidiho azafady GradImages.
Ao anatin'ny fandraisana anjara amin'ny diplaomanao sy alohan'ny fisoratana anarana dia handefa mailaka aminao i GradImages, porofon'ny fakana sary taratasy ary mety handefa fampandrenesana hafatra an-tsoratra tsy voatery.
5. Fenoy ny fepetra takiana amin'ny diplaoma rehetra
Ireo nahazo diplaoma mety dia tokony handalo sy hamita ny fepetra takiana amin'ny diplaoma rehetra Enga anie 2, 2021, mba ho voatanisa ao amin'ny Program commencement.
Azafady mba alao antoka fa havaozy amin'ny Biraon'ny Mpisoratana ny fampahalalana rehetrao. Ny antsipiriany natao pirinty tamin'ny diplaomanao dia ho faritan'ny fampahalalana ananantsika amin'ny rakitra ho anao. Ny diplaoma dia halefa amin'ny mpianatra amin'ny adiresy ao anaty rakitra.
Mamporisika ny mpianatra rehetra izahay mba hijery ny satan'ny kaontiny amin'ny Office of the Account of Student alohan'ny fanombohana. Fantaro azafady fa ny tsy fanatanterahana ny adidy ara-bola rehetra amin'ny oniversite dia mety hisakana anao tsy hahazo ny diplaomanao sy / na ny sora-tanana amin'ny fotoana mety..
Fampahalalana momba ny mpianatra
Azafady, mieritrereta mba tsy ho tonga amin'ny 1 ora sy sasany hariva raha hijery ny torolàlana momba ny lanonana.
Rehefa tonga dia afaka miditra amin'ny fidirana Atsinanana amin'ny kianja Hertz ireo nahazo diplaoma.
Ny mpianatra nahazo diplaoma dia handray ny karatra anarany amin'ny latabatra miorina ambadiky ny lampihazo. Ny karatra dia vita pirinty miaraka amin'ny anaranao ara-dalàna ary mifanitsy amin'izay atao pirinty ao amin'ny programa Commencement.
Vantany vao voarainao ny karatrao dia fenoy azafady ny fizarana fampahalalana momba ny fifandraisana ao ambadiky ny karatra ho an'ny mpaka sary.
Ity karatra ity dia tokony ho entinao mandra-pahatongany omena ny mpitory alohan'ny hiampitana ny lampihazo.
Ny karatra dia hanana ny sezanao voatanisa eo amin'ny zorony ambany koa.
Ny seza an-tsekoly dia homena laharana seza ao amin'ny Fizarana 115, 116, na 117 abidia, ary amin'ny alàlan'ny programa.
Mariho tsara fa raha mankany amin'ny sezanao dia tsy maintsy mandeha ambony rihana ianao. Raha olana io dia ampahafantaro ny mpiasan'ny oniversite alohan'ny Andro Fiandohana.
Alao antoka fa miaraka aminao ny karatra anaranao alohan'ny hanombohanao ny filaharam-be.
Ny satroka sy akanjo fanampiny dia hoentina any amin'ny lanonana raha mila soloina ny anao ka miangavy anao hahita mpiasa ao amin'ny oniversite raha manana olana ianao. Azafady mba mariho fa hisy voafetra ny satroka sy akanjo amboniny mandritra ny lanonana; raha misy olana amin'ny satrokao sy / na akanjo 4 andro na mihoatra alohan'ny lanonana dia miangavy anao hankany amin'ny campus Fort Myers hiresaka amin'ny Office of Auxiliary Services momba ny kapaoty sy / na akanjo.
Akanjo sy fitondran-tena amin'ny akanjo
Tongava vonona hamirapiratra!
Ianao dia antenaina hitafy ny akanjo akademika feno (satroka, akanjo sy fehiloha na fehin-kibo, raha azo ampiharina) mandritra ny lanonana fizarana diplaoma.
Ireo mpianatra nahazo diplaoma dia hitafy ny satrony sy ny akanjo rehefa tonga ao amin'ny Hertz Arena. Ho afaka hanampy ireo mpiasa.
Azafady azafady amin'ny fianakaviana, namana na vahiny ny zava-tsarobidy rehetra sy ny zavatra manokana.
Manaova akanjo fanao amin'ny akanjo mahazatra:
Lehilahy - akanjo lava misy vozon'akanjo, pataloha maizina, fehin-kibo mainty, ary kiraro mainty.
Vehivavy - akanjo mainty, na zipo na pataloha sy blouse, misy kiraro mainty sy mihidy rantsana. Kiraro kiraro avo tsy soso-kevitra. Flip-flop, kiraro tenisy ary kiraro fotsy tsy tokony hanaovana.
Raha ilaina dia tsindrio azafady amin'ny vy mangatsiatsiaka ny lambanao.
Ny satroka dia tokony hipetraka misoritra miaraka amin'ilay boribory mihantona eo amin'ny ilany ankavanana. Ireo mpianatra nahazo diplaoma dia tokony hitandrina mba tsy hamela ny boribory hanelingelina mandritra ny fakana sary.
Raha azo ampiharina, dia tokony apetaka amin'ny tadiny ny tady fanomezam-boninahitra miaraka amin'ny boribory mihantona avy amin'ny lafiny roa. Hozaraina ny tadin'ny voninahitra araka ny politikan'ny oniversite:
Volafotsy sy mena ho an'ny summa cum laude (3.90-4.0 GGPA);
Double Red ho an'ny magna cum laude (3.76-3.89 GGPA); na
Volafotsy indroa ho an'ny cum laude (3.50-3.75 GGPA).
Ny anjerimanontolo dia manandrana mandamina sy mitarika lanonana manan-danja sy mendrika. Ny fanekena ny zava-bitan'ny akademika dia tokony hohajaina am-panajana. Ny fitondran-tena tsy mendrika, ny fisaratsaram-poana, na ny fisian'ny alikaola na zava-mahadomelina dia antony hanesorana tsy ho ela ary mety hotazomin'ny oniversite.
Nasaina ireo nahazo diplaoma hampiasa ny trano fidiovana alohan'ny hanombohan'ny lanonana, satria tsy avela hiala amin'ny toeranao ianao raha vao manomboka ny lanonana.
Ireo nahazo diplaoma dia takiana amin'ny fipetrahana mandritra ny programa.
Ireo nahazo diplaoma dia mipetraka amin'ny fizarana 115, 116, na 117 mba handehanany manerana ny lampihazo. Ity baiko ity dia mifanaraka amin'ny lisitry ny lisitra ao amin'ny programa fanombohana, amin'ny abidia, ary amin'ny ambaratonga.
Hangataka aminao hidina amin'ny faritra amin'ny gorodona ianao amin'ny 3 ora sy sasany hariva. Mamorona andalana betsaka araka izay azo atao ao ambadiky ny sehatra ianao. Rehefa manomboka ny filaharam-be dia hanohy hifindra haingana hatrany amin'ny faran'ny tany ny mpianatra. Ny mpianatra tonga tara dia hapetraka ao ambadiky ny nahazo diplaoma rehetra ary mety tsy hipetraka eo akaikin'ny hafa izay mahazo ny mari-pahaizana sy ny mari-pahaizana mitovy. Azafady, alao antoka fa tonga ara-potoana ianao.
Grand Marshal filohan'ny birao
Homena ny programa fanombohana rehefa miditra amin'ny rihana lehibe ianao.
Ampidiro ny rihana lehibe manaraka ny lafiny avaratry ny kianja. Mandrosoa hatrany ambadiky ny seza, mihodina miankavanana ary mivadika havanana indray mankeny amin'ny lalantsara afovoany.
Antsipiriany momba ny lanonana fanombohana
Rehefa vita ny mpianatra sy ny mpandahateny nasaina dia hangataka ny kandidà rehetra ny filoha mba hijanona azafady.
Ny mari-pahaizana Master dia hatolotry ny filoha.
Raha vantany vao vita io ampahany io, dia halefa any amin'ny faritra an-tsehatra ianao izay hamakivakiana ny sehatra iray isaky ny mandeha mahita olona efa voatondro mialoha.
Atolory azy ireo ny karatra anaranao mba hahafahany mamaky ny anaranao.
Raha vantany vao manolotra ny karatra anaranao ianao dia mandrosoa manerana ny lampihazo araky ny voalaza ao amin'ny tabilao.
Ny tànana ankavia ny fomba marina hanekena ny rakikiran'ny diplaoma avy amin'ny Dr. Meyer. Avy eo, mifanome tanana amin'ny tananao ankavanana.
Eto no misy ny iray amin'ireo sary maka azafady mba tadidio ny mitsiky.
Ny Grand Marshal avy eo dia hampihodina ny tananao ary hilamina ny tananao.
Hanome anao fanomezana ny tambajotra Alumni, ary hiarahaba anao ny mpampianatra anao alohan'ny hiverenanao amin'ny toeranao.
Mipetraha azafady rehefa miverina amin'ny toeranao ianao.
Ny diplaoma bakalorea, mpiara-miasa ary mari-pahaizana dia hanaraka ny fomba fanao.
Raha mipetraka ao amin'ny Fizarana B ianao dia araho ny torolalana omena anao hahazoana ny sehatra ary hiverina amin'ny toeranao.
Hampahafantatra anao ny mpiasan'ny Hodges University rehefa mety hivoaka ny laharanao.
Aza mijanona azafady rehefa tonga any amin'ilay faritra ao ambadiky ny sehatra ianao satria misy diplaoma hafa miezaka miala koa.
Miezaha manomana mialoha ny toeram-pivoriana miaraka amin'ny fianakavianao sy ny namanao satria mety hivoaka ny kianja amin'ny lafiny roa ao ambadiky ny lampihazo ianao.
Ny lanonana fanombohana mivantana dia azo jerena ao amin'ny pejin-tranontsika amin'ny 4:00 hariva 20 jona 2021.
Làlana mankany amin'ny Hertz Arena
Avy any Avaratra: Raiso ny I-75 mankany amin'ny Exit 128 (Alico Road). Mizotra atsinanana amin'ny Alico Road mankany Ben Hill Griffin Parkway. Raiso i Ben Hill Griffin tokony ho 3.5 miles atsimo. Ny Arena dia miorina amin'ny ilany ankavanana.
Avy any atsimo: Raiso ny I-75 mankany amin'ny Exit 123 (Corkscrew Road). Mizotra mianatsinanana amin'ny Corkscrew Road. Raiso Ben Hill Griffin avaratra ary ny Arena dia eo amin'ny ilany ankavia.
Misokatra adiny telo ny fiantsonan'ny fiara mialoha ny lanonana fanombohana.
Betsaka ny fijanonana azo alaina ao amin'ny Hertz Arena ao amin'ireo toerana fijanonan'ny fiara.
Tsy misy sarany ny fijanonan'ny fiara.
Fitsipika Hertz momba ny fitondrana entana manokana ***** Vakio azafady
Hertz Arena dia manana fitsipika henjana momba ny inona ary tsy avela hoentina ao amin'ilay toerana. tsindrio ETO ho an'ireo lalàna ireo, izay hampiharina mafy.
Tokony ho tonga eo anelanelan'ny 3:00 sy 3:30 hariva ny vahiny
Manolotra seza misokatra ny kianja, tsy mila tapakila.
Ny fipetrahana tsy misy kilema dia misy amin'ny lafiny atsimo. Misy toerana malalaka ho an'ny seza misy kodiarana sy seza misy toerana malalaka. Ny vahiny iray dia mety hipetraka miaraka amin'ny vahiny manan-kilema.
Mariho tsara fa tsy mahazo mandeha eny amin'ny kianja filalaovana zazakely, balaonina ary voninkazo. Ny strollers, balaonina ary voninkazo dia hozahana miaraka amin'ireo mpiasan'ny Hertz ary tazonina eo amin'ny latabatra lehibe ary azo alaina aorian'ny lanonana.
Ny trano fivarotana iray dia hisokatra ho an'ny sakafo sy zava-pisotro amin'ny lafiny atsimo amin'ny kianja.
Ny ray aman-dreny, ny fianakaviana ary ny namana dia entanina hipetraka hatrany, satria ny fandaozana ny lanonana dia maneho tsy fanajana fatratra ny mpanatrika rehetra.
Azafady mba tadidio fa tsy misy mahazo mahazo miditra amin'ny gorodona lehibe na eo an-dalantsara haka sary.
Mpaka sary matihanina iray no nokaramaina haka sary tsy andoavan-karama isaky ny nahazo diplaoma.
Ny sary sy ny sary dia azo raisina avy amin'ny faritra ipetrahana.
FAQ an'ny mpianatra nahazo diplaoma
Aiza no halehako haka ny tadim-boninahitro?
Misy tady fanomezam-boninahitra azonao alaina ao amin'ny campus Fort Myers, na azonao atao koa ny mangataka namana na olona ao amin'ny fianakavianao haka ireo tadiny ho anao. Azonao atao koa ny maka azy ireo amin'ny andro fanombohana.
Rahoviana aho no afaka mahazo ny diplaomako?
Amin'ny maha diplaoman'i Hodges anao dia hahazo diplaoma niomerika sy diplaoma ara-batana ianao. Ny torolàlana momba ny fahazoana ny diplaomanao dizitaly dia halefa amin'ny mailaka Hodges anao. Ny diplaomananao ara-batana dia halefa any amin'ny adiresy izay ao anaty rakitra.
Iza no hifandraisako raha mahazo hafatra diso aho rehefa tsindrio ny rohy eo amin'ny pejy fizarana diplaoma?
Vantany vao nangataka diplaoma ianao tamin'ny famitana ny endrika Intent to Grgraduate, tsy avelan'ny rafitray hamerina izany indray. Izany no antony ahazoanao hafatra diso. Raha tsy nahavita ny antontan-taratasim-pahaizana momba ny diplaoma ianao dia mifandraisa amin'ny biraon'ny mpirotsa amin'ny 239-938-7818 na registrar@hodges.edu.
Ahoana no fomba hanafihako tapakila hahazoana diplaoma? Raha mila tapakila bebe kokoa aho hahazoana diplaoma, inona no tokony hataoko?
Rehefa nahavita ny antontan-taratasinao Intent to Graduate ianao dia nisy toerana iray nampidirina ny isan'ny fianakaviana / namana izay hanatrika. Tsy manonta tapakila hahazoana diplaoma izahay, ka raha manana fianakaviana / namana fanampiny maniry hanatrika ianao, dia raisin'izy ireo tsara!
Azoko haingoina ve ny satroka nahazoako diplaoma?
Manentana anao izahay handravaka ny satrokao! Azafady tadidio fa tokony haingoina izy io mba hanehoana ny fientanentanana rehetra tamin'ny zava-bitanao, na izany aza, tokony hatao amin'ny tsiro sy fanajana tsara izany. Azafady mba tadidio fa ny tadinao dia hapetaka amin'ny satronao - azafady aza apetraka amin'ny saron-doha mety hanakana ny tanety tsy hapetraka amin'ny satrokao izany.
Azoko atao ve ny mandray ny regalia mandritra ny lanonana fizarana diplaoma?
Manoro hevitra anao izahay fa aza miandry mandra-pahatongan'ny lanonana fizarana diplaoma haka / mividy ny regalia. Hanana regalia voafetra be isika amin'ny lanonana miaraka amin'ny habe voafetra bebe kokoa. Ny safidy mety indrindra dia ny manafatra ny regalia anao amin'ny fotoana rehetra http://colleges.herffjones.com/college/_Hodges/ fa ny andro farany hanafarana dia Enga anie 21, 2021. Entanina ny mpianatra hanafatra ny regalia mialoha mialoha an'io fe-potoana io mba hiantohana ny fandefasana ara-potoana.
Iza no hifandraisako amin'ny fanontaniana momba ny diplaoma?
Ho an'ny Regalia (satroka / akanjo), saron-doha, tady, mari-pahaizana diplaoma, paingotra fankasitrahana, tsimatra alimini, saram-pianarana, sns. universitystore@hodges.edu.
Ho an'ny diplaoma, tadim-boninahitra, sora-tanana (aorian'ny fanomezana mari-pahaizana), mifandraisa amin'ny Biraon'ny Mpiraki-draharaha amin'ny (239) 938-7818 na registrar@hodges.edu
Mijanona amin'ny fifandraisana! #HodgesAlumni
Ny Hodges University Alumni Network no làlanao hijanona hifandray amin'ny tambajotra sy hihaona amin'ny Hodges Alum namanao. Tsy misy vidiny handraisana anjara ary tombony be dia be ho an'ny mpikambana. Azafady mba havaozina hatrany ny tambajotra Alumni momba ny adiresy sy ny fanovana asa, ary / na ny zava-bitan'ny matihanina mba hizaranay amin'ny hafa ny fahombiazanao. Mifandraisa aminay alumni@hodges.edu. Ny adiresy mailaka amin'izao fotoana izao dia zava-dehibe amin'ny fifandraisana amin'ny alimana sy ny fahazoana ny fampahalalana alimni.